Otu esi eme ka onu ego ntụgharị dijitalụ na obere akpa ego | Martech Zone
Thursday, May 28, 2020 Thursday, May 28, 2020 Nina Ritz
Ọnụọgụ mgbanwe nke ekwentị na-anọchite pasent nke ndị họọrọ iji ngwa mkpanaka gị / ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma, site na ọnụ ọgụgụ ndị enyere. Nọmba a ga-agwa gị ọ dị mma mkpọsa mkpanaka gị dị na, na uche na nkọwa, ihe kwesịrị ka mma.
Ọtụtụ ma ọ bụghị azụmaahịa e-azụmahịa ndị na-ere ahịa na-ahụ uru ha dara mgbe ọ na-abịakwute ndị ọrụ ekwentị. Ratezụ ahịa ịzụ ahịa ọnụego dị oke egwu maka ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka, nke ahụ bụkwa ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ ime ka ndị mmadụ lelee anya site na onyinye ịmalite.
Ma olee otu nke a ga-esi kwe omume, mgbe ọnụọgụ ndị na-ere ahịa mkpanaka na-eto site na iri puku kwuru iri nde kwa afọ?
Isi Iyi: Statista
Ekwentị mkpanaka agbanwebeghị site na nzube mbụ ha. Ọ bụrụ na anyị na-eme ihe n'eziokwu, oku na ederede abụghị ọrụ bụ isi nke igwe eji arụ ọrụ maka ọtụtụ ndị bi na ya. Ngwaọrụ mkpanaka aghọwo ndọtị nke mmadụ nke oge a ma na-eje ozi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nzube ọ bụla, site na odeakwụkwọ nimble na ụgbọ ibu azụmahịa n'ịntanetị.
Nke a bụ ya mere ịhụ ekwentị dịka ihe ọzọ na-ezughị ezu ezughị. Ngwa, saịtị na usoro ịkwụ ụgwọ ga-agbanwe ma mezigharịa maka ngwaọrụ ndị a naanị. Otu n'ime usoro mgbanwe kachasị maka ịme azụmahịa ekwentị bụ njikwa ego ewallet, nke bụ isiokwu nke edemede a.
Kwalite ọnụego mgbanwe ekwentị
Nke mbu, ka anyi mee ka otu ihe doo anya. Azụmahịa ekwentị na-ewere ọnọdụ ụwa e-azụmahịa dị nnọọ ngwa ngwa. Naanị afọ ise ọ hụrụ ọhụụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 65%, ugbu a na-ejide 70% nke ngụkọta e-azụmahịa. Shoppingzụ ahịa mkpanaka dị ebe a iji nọrọ na ọbụna weghaara ahịa ahụ.
Ọ bụ ihe ijuanya na ịzụrụ ụgbọ ahịa ịzụ ahịa ka dị elu karịa na ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka karịa otu ọdịnaya ahụ na kọmputa kọmputa. Nke a bụ nnukwu nsogbu nye onye ọ bụla, ọkachasị obere ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ ndị ọhụrụ na mgbanwe ahụ. Gịnị kpatara nke a?
Nke mbu, enwere ihe doro anya. A na-arụkarị ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị arụ ọrụ, ọ bụkwa maka ezi ihe kpatara ya. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ, nha, ihe nchọgharị, na sistemụ arụmọrụ nke na-eme ezigbo websaịtị enyi na enyi na-achọ nnukwu ego na oge.
Chọ na ịgagharị na ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka, na iri ma ọ bụ ọtụtụ narị ihe ịzụ ahịa na-agwụ ike ma na-akụda mmụọ. Ọbụna mgbe onye ahịa ahụ dị isi ike iji gabiga ihe ahụ niile wee gaa n'ihu maka ndenye ọpụpụ, ọ bụghị ọtụtụ nwere irighiri akwara iji tinye ọnyà nke usoro ịkwụ ụgwọ.
Enwere ihe ngwọta mara mma. Ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ọnụ karịa na mbido, mana ọ na-akwụ onwe ya ụgwọ ngwa ngwa. Ngwa bụ azịza kachasị mma maka ngwaọrụ mkpanaka. Emebere ha maka ebumnuche nke iji ekwentị ma na-enwe obi uto kari ile anya. Na, dị ka anyị pụrụ ịhụ, ngwa ọdịnala nwere ọnụ ọgụgụ dị ntakịrị nke ịzụ ahịa ịzụ ahịa karịa nke desktọọpụ na weebụsaịtị.
Ihe Ngwọta Ya
Ndị na-ere ahịa ahịa bụ ndị gbanwere site na ebe nrụọrụ weebụ mkpanaka gaa na ngwa egwu ahụwo nnukwu mmụba na ego ha nwetara. Echiche ngwaahịa ritere site na 30%, ihe ndị agbakwunyere n'ahịa ịzụ ahịa jiri 85% rịa elu na nzụta zuru ezu bilitere site na 25%. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọnụego ntụgharị dị mma site na iji ngwa mkpanaka.
Ihe na-eme ka ngwa ndị ahụ nwee mmasị na ndị ọrụ bụ ụzọ amamịghe nke igodo, n'ihi na, emechara ha maka ngwaọrụ mkpanaka. Otu nnyocha si na 2018 gosiri na ọtụtụ ndị ahịa ji ịdị mma na ọsọ ọsọ, yana ohere iji otu ịzụrụ ihe site na iji e-wallets echekwara na kaadị kredit.
Mma nke wallets dijitalụ di nfe ha na nchekwa echekwara. Mgbe emere azụmahịa site na iji obere akpa dijitalụ, ọ dịghị data gbasara onye zụrụ ahịa na-ekpughe. A na-amata azụmahịa ahụ site na nọmba pụrụ iche ya, yabụ na ọ nweghị onye ọ bụla n'ime usoro a nwere ike ijide ozi nke kaadị akwụmụgwọ onye ọrụ. Etinyeghị ya na ekwentị onye ọrụ.
Ego obere dijitalụ na-arụ ọrụ dị ka onye nnọchiteanya n'etiti ezigbo ego na ahịa. Imirikiti nyiwe ndị a na-enye usoro ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị a na-akpọ otu-pịa-zụta, nke pụtara na ọ dịghị mkpa maka dejupụta ụdị ọ bụla na ịnye ozi ọ bụla - ọ bụrụhaala na ngwa ahụ na-enye ohere ịkwụ ụgwọ e-wallet.
Fọdụ n'ime obere akpa ego dijitalụ taa bụ:
Samsung ịkwụ ụgwọ
PayPal Otu Aka
Ebe ọpụpụ Visa
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụfọdụ n'ime ha bụ akọwapụtara OS (ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ha na-anwale crossovers na mmekorita), mana ọtụtụ ndị nwere onwe ha dijitalụ wallets dị n'ofe nyiwe niile ma na-agbanwe agbanwe. Ha na-enye nkwado maka ọtụtụ kredit na kaadị debit, yana ịkwụ ụgwọ ego na nkwado mkpuchi.
Ma ị ga-arụ ngwa site na ncha iji kwado mkpa gị na ịchọrọ ịchọ mma, ma ọ bụ jiri usoro ikpo okwu e-commerce dị njikere, ijikọ obere akpa ego dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-eji ikpo okwu, imirikiti ọrụ siri ike emere gị.
Dabere n'ụdị azụmahịa na ọnọdụ gị, nyiwe e-commerce ga-enyere gị aka ịhọrọ e-wallets kachasị mma maka otu gị. Naanị ihe ga-eme ka ịghara ime bụ itinye ego ndị ahụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iwulite site na ncha, ọ ga-abụ ihe amamihe ịmalite na nhọrọ sara mbara nke e-obere akpa wee soro usoro. Fọdụ obere akpa dijitalụ nwere ike ịchọ karịa ndị ọzọ, nke a dabere na ọnọdụ gị, ngwongwo ị na-ere yana afọ ndị ahịa gị.
Enwere ọtụtụ ntuziaka ebe a.
Ebee ka ndị ahịa gị dị? Mpaghara ọ bụla nwere ọkacha mmasị ya, ọ dịkwa mkpa ka ị nwee uche na nke a. Iwu blanket maka ụlọ ahịa zuru ụwa ọnụ bụ PayPal. Mana ọ bụrụ n ’ị maara na akụkụ buru ibu nke ahịa gị si China abịa, ị kwesịrị ịgụnye AliPay na WeChat. Ndị ahịa gọọmentị Russia na-ahọrọ Yandex. Europe nwere nnukwu njirimara ọrụ maka Skrill, MasterPass na Visa Checkout.
Kedu ngwaọrụ ndị kachasị ewu ewu? Lelee metrik gị. Ọ bụrụ na akụkụ buru ibu nke ndị na-azụ gị jiri iOS, ọ ga-abụ ihe amamihe itinye ApplePay. Otu na-aga maka gam akporo ịkwụ ụgwọ na Samsung Pay.
Kedu oge ndị ahịa gị dị afọ ole? Ọ bụrụ na ị na-emeso ndị na-eto eto ihe ka ukwuu, gụnyere obere wallets dị ka Venmo bụ ee siri ike. Ọtụtụ ndị nọ n’agbata afọ iri atọ na iri ise na-arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ dịka ndị nwe onwe ha ma dabere na ọrụ ndị dị ka Skrill na Payoneer. Anyị niile maara na Millenials abụghị ndị nwere nnukwu ndidi, ọ ga-ahapụrịrị ịzụrụ ma ọ bụrụ na ha ahụghị nhọrọ ịkwụ ụgwọ kachasị amasị ha.
Kedu ngwongwo ị na-ere? Ngwa ahia dị iche iche na-adọta ọgụgụ isi dị iche iche. Ọ bụrụ na ịgba chaa chaa bụ turf gị, WebMoney na nyiwe ndị yiri ya nke na-enye ndepụta ego bụ ezigbo nhọrọ ebe ha na-ewu ewu na obodo. Ọ bụrụ n’ị na-ere egwuregwu na ngwa ahịa dijitalụ, chee echiche maka itinye e-wallets n'ọrụ na-akwado cryptocurrencies.
Y’oburu n’ichaghi ebe igha, gwa ndi ahia gi. Onye ọ bụla hụrụ ka a jụrụ ya maka uche ya, ị nwere ike ịtụgharị nke a na uru gị site na ịnye nyocha dị mkpirikpi. Jụọ ndị ahịa gị ihe ha ga-achọ ịhụ n’ụlọ ahịa gị. Kedu otu ị ga - esi melite ahụmịhe ịzụ ahịa ha, yana ụzọ ịkwụ ụgwọ ha chere na ọ kachasị mma. Nke a ga - enye gị ezigbo ntụzi aka maka nkwalite n’ọdịnihu.
E-azụmahịa dị maka onye ọ bụla. O meela ka ire onye obula ahia n’ebe nile odi nfe… Ma dikwa ike n’otu oge. Sayensị na ọnụ ọgụgụ dị n’azụ ahịa a na-agbanwe agbanwe anaghị adị mfe.
Uche nke onye na-azụ ihe agbanweela ọtụtụ n'ime afọ 10 gara aga ma ị ga-emerịrị ihe kwekọrọ na ya. Mụta ma gbanwee, n'ihi na ije nke ụwa dijitalụ na-agbanwe bụ ihe na-egbu mmụọ.
njikọ Martech Zone Isiokwu
Tags: ugwo ugwoandroid ụgwọobere akpa dijitalụe-azụmahịamelite ọnụego mgbanwemobile ngwangwa mkpanaakamobile mkpọsangwa ahiamobile ọnụego mgbanweòkè ekwentị mkpanakaonye na-ere ahịa ekwentịmobile saịtị vs ngwa mkpanaakaọnụ ọgụgụ ndị na-ere ahịa mkpanaka n'ime anyịndenye ọpụpụ visa
Nina bụ teknuzu na-eme nchọpụta na onye edemede na NhaziRush, ahịa B2B jikọtara ụdị na ụlọ ọrụ. Ọ hụrụ n'anya ịkọkọrịta ahụmịhe ya na ọdịnaya bara uru nke na-akụziri ma na-akpali ndị mmadụ. Isi ochicho ya bu imewe ahia na ntanetị. N'oge ya n'efu, mgbe ọ na-apụ na kọmputa, ọ na-enwe mmasị ịme yoga na ịgba ịnyịnya ígwè.
Wzọ asaa AI na-emegharị Mgbasa Ozi Email